Njalo umshayeli ngeke ngokushesha noma kamuva ubhekene isidingo sokusebenzisa i-inhlangano ezifana ezibalulekile yezimoto njengoba Jack ugingqe. Car elungisa noma esikhundleni amasondo ngokuvamile kakhulu ngeke akwenze ngaphandle kule divayisi. Kodwa okokuqala kudingeka wazi ukuthi yini uhlobo indlela.
Jack - idivayisi ekhethekile elikuvumela ukuba baphakamise futhi silungise isisindo esindayo ezingeni ukuphakama ethile. Ngamunye umnikazi we imoto uzokwazi ukuba siqonde zako.
Idivayisi elula kakhulu futhi ephumelelayo ubhekwa wayo wokubacindezela, elisebenza sibonga ekhethekile uwoyela wokubacindezela kanye piston. Jack okunjalo elendlalekile, ukulungisa silula lokufeza, kuyasiza hhayi kuphela ukukhanda izimoto, kodwa umnikazi we umngane yensimbi ngamunye.
I yokusebenza Umgomo we Jacks
Jacks umfutholuketshezi kubhekwe, kodwa likwazi isakhiwo ukuhluka. Uhlukanisa kwamanye igobolondo Ingaphandle, njengoba ungeze amabhangqa amabili amasha kwamasondo. Idivayisi uyakwazi kancane kancane siphakamise imoto ngenkathi ngokwayo waxosha ngaphansi kwaso. Jack podkatnye (kudivayisi nokulungisa angahlola bebodwa) is eliqhutshwa ukuzamazamisa isigwedlo. Kodwa ukwehlisa ke, udinga ukusebenzisa valve isikulufa ekhethekile ngokuvula ke.
Kunezinhlobo ezahlukene podkatnye Jacks wokubacindezela. Bahlukene ngokuvumelana isisindo izimoto ukuthi bazoba ukukhulisa. Kungaba njengoba izimoto, nesisindo esingamathani amathathu futhi wezimpahla nesisindo esingaphezu kwamathani mayelana amabili. Naphezu omkhulu izinkomba isisindo enjalo podkatnye Jack wokubacindezela uthola umsebenzi masinya.
Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu of iloli
Jacks, ukulungisa okungase kwenziwe ekhaya ungaba ukulimala izimbangela ezimbalwa. Okuvame kakhulu kulezi yilezi: uyisehluleki noma olungaphelele idivaysi ezisindayo, kanye ukugeleza uwoyela. Ngayinye yalezi zinkinga kudinga ukulungisa ngokushesha.
Jacks (ukulungisa, uwoyela ushintsho, izici zichazwe ngokuningiliziwe kulesi sihloko) ukuvelela, ngokuvamile uyahluleka ngenxa ukugeleza uwoyela. Kulokhu-ke kubalulekile ukuba ukuqaqa ngokuphelele kudivayisi. Qiniseka ukususa pistons futhi uhlole ukuthi akha ukugqwala. Ngokuphelele uhlanza konke wetincenye teluhlaka futhi ususe zonke izinhlobo zokungcola. Manje hlola isitokwe. Uma uthola ukuthi has simise lwalugobile futhi ephazamisekile, awukwazi ngisho ukuzama bazilungisele umshini ngokwakho. Kulokhu, cishe, kuzodingeka ukuthenga Jack entsha.
Enye Imbangela evamile ukwehluleka kudivayisi ubhekwa odla noma zokugwema ukuphuka of valve akhethekile okuyilokho, eqinisweni, obhekene mshini ukwehlisa nokuvusa.
Jacks: ukukhanda ama-valve
Ukuqala yokulungisa uwoyela valve transmissive, uyasikrufulula ke bese uhlole ukungcola zanqwabelana. Futhi, qiniseka ukuba banake khona izinhlobo ezahlukene deformations. Uma uthola ngisho ushintsho kancane ngesimo sangaphandle valve, ngokushesha esikhundleni salo esisha.
Uma uthola lokuhlushwa ezinkulu zokungcoliswa akuyona bahlanza umphini uzoqala ukuqaphela, njengoba uwoyela ugobhozela. Lokhu kungenxa yokuthi ibhola kuyavumelana isokhethi akuyona Friend kakhulu.
Ukulungisa of wokubacindezela Jacks podkatnye kufanele kuqale olunzulu ngamanzi valve. Lokhu kwenziwa ukuze kahle ukuhlanza idivayisi kusukela zonke ukungcola zanqwabelana. Ngaphambi kokwenza lokhu inqubo, kusengaphambili, ukulungiselela esitsheni ekhethekile lapho kuzohlanganisa uketshezi ubudala. Nakuba ketshezi ngeke angakhishwa, qiniseka opha ohlelweni. Lokhu kumele kwenziwe usebenzisa isigwedlo ezisebenza ngokufaka wehlise futhi nokuphakamisa.
Ngemva le nqubo, okuyinto kunoma yiliphi icala akunakugwenywa, kulandele valve ukugeza, idivayisi yokuhlanza kusukela izinsalela ubudala uketshezi luyasebenza bese ezingcolisa zanqwabelana. Ukulungisa podkatnye imoto Jack ekhaya kuhilela esikhundleni okuphoqelekile okwenziwa ezikhungweni zonke gaskets futhi cuffs. Uma izingxenye elonakalisayo babe ngqo ebusweni umsebenzi, ukuhlanza ngu unscrewing ekhanda umzimba ke.
Nyalo-ke gcwalisa ekhethekile egeza ketshezi ithangi noma uphalafini futhi enze ukudonsa. Uma wenza lokhu, ugcwalise ethangini uketshezi ahlanzekile wokubacindezela.
Iphutha esiqubukile ngenxa kumiswa air Bubbles
Isikhathi esining impela, jack usungaqala ukusebenza kahle ngenxa yaleso sizathu, njengoba ekuqongeleleni emoyeni abagcwele endaweni umsebenzi. Ngokuvamile lokhu senzakalo ebonwe esincane kakhulu amafutha.
Ukulungisa podkatnye Jacks wokubacindezela abanenkinga enjalo kungenziwa ekhaya. Ukuze uqale, udinga ukususa cap ngethangi Uwoyela kokuvula valve dlula. Ngemva le nqubo kumele kwenziwe ngokushesha uzotshala of futha ka Jack yakho. Phela, ingabe kufanele yenziwe yini aphosekile kakhulu. Nale nqubo, uzokwazi ukuhumusha Bubbles ethangini uwoyela.
Manje njengoba usukwenzile lokhu inqubo, qinisekisa ukuthi uvale lid ethangini amafutha dlula valve uqobo. Uma ngokuqinile ukulandela yonke imiyalelo ke Jack yakho izoqala ukusebenza ngokuphelele, njengoba nje emva kokuthenga. Uma ngemva kwalokhu inqubo ukwazi ethola khona izinsalela emoyeni, bese uphinda inqubo isikhathi esisodwa.
Enye indlela ukususa emoyeni
Indlela ngenhla echazwe akuyona kuphela ukususa air Bubbles. Lokhu kungenziwa ngezindlela ezahlukene. Ukuze wenze lokhu, uyasikrufulula inaliti ukukhiya ematfuba ezimbili. Manje isandla sakho plunger, eyilethe ngesikhathi esifanayo i nephuzu. Ngemva kuphakamisa sakhe ubuyele isikhundla phansi. Yenza lesi senzo izikhathi eziningana.
Ukuze emoyeni Asingeni ebusweni umsebenzi, ungakhohlwa ukuqapha ezingeni uwoyela phezulu naye ngesikhathi.
Ukukhetha kanye ukuthenga Jack izinga
Uma ufuna ukuthenga 3t Jack podkatnye ke, kungakhathaliseki ukuthi kuyabiza ithuluzi lakho, le ntengo isazoba aphule njalo. Ngakho wena nje kudingeka ufunde imithetho eyisisekelo ukusebenza kwawo, kanye nolwazi oluyisisekelo nge-ukulungisa ekhaya. Ukuze wenze siqu umsebenzi wabo yesondlo, ungakhohlwa ukuthenga isethi olukhethekile amabhowudu nokugeza uketshezi akhethekile uwoyela.
Ukukhetha umfutholuketshezi Jack elendlalekile, kudingeka ucabangele ongakhetha eziningana. Uma ufuna ukuyisebenzisa ekhaya, ungakwazi ukuthenga iyunithi ukuthi kuyoba ephelele isisindo semoto yakho. Ngokuvamile kuba 3t Jack podkatnye. Uma ufuna ukuthenga idivayisi ukusetshenziswa e workshop, kuyasiza idivayisi nge esithwele obunamandla futhi okusezingeni eliphezulu yokutakula izinga. Ukuthenga earphone, akukuhle ukulondoloza, njengoba umkhiqizo izinga uyakuwaphula kancane kaningi futhi izothatha wena isikhathi eside.
Uma ugingqe Jack 2 t engabuzi, futhi ilungisa izinto kungaba kwenziwe ekhaya. Kodwa akwenzekanga lokho, kubalulekile ukuba ukuqhuba zokuvimbela ngesikhathi esifanele. Yiqiniso, akekho uthi ukuthi idivaysi yakho ngeke ukukhonza unomphela, kodwa futhi ekuphileni inkonzo yayo, ungakwazi ukudlulisa izikhathi eziningana.
Yakha izimo ezinhle isitoreji se-jack. Landela nangohlobo lwezinto uketshezi ukusebenza. Isikhathi ukuhlanza ithuluzi ekungcolisweni. Ungakhohlwa ukuthi idivayisi hhayi watusa kakhulu ngokweqile.
Indlela ugcwalise uwoyela
Ukuze uqale, ukulungiselela jack. Hlola ukuthi aluzange lube ngokuphelele. Manje thola kunesikhala ukuze uwoyela Gulf. Susa umshudo kanye emgqonyeni ukuqhubeka inqubo ukugcwalisa. Gcwalisa uwoyela kuze ize iphume. Uma ukutholile, khona manjalo ukuyeka umsebenzi. Qedela Ukuvalwa entanyeni esebenzisa a stub.
Iseluleko Iwusizo ekusebenziseni
Ngokushesha ngaphambi kokuba inqubo uwoyela ukugcwaliswa, ufunde ngokucophelela izincomo ekusebenzeni imodeli yakho podkatnye Jack wokubacindezela. Ngempela, ngezinye izikhathi kuba lapho inqubo uwoyela ukugcwaliswa kuyinto ukuhluka ukuthi kuchaziwe ngenhla.
Ngaphambi kokusebenzisa i-Kunconywa ukuqeda emoyeni ngokweqile zanqwabelana kudivayisi. Phakamisa idivayisi awubeka phansi ubuncane. Ngakho ukususa zonke emoyeni ezingadingekile.
Sebenzisa kuphela uketshezi eside ziphumelela. Ungayisebenzisi uketshezi equkethe utshwala.
Heater infrared "Balu" (Ballu): imiyalelo, Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Awu iphampa ngoba amanzi: abakhiqizi, izintambo idayagramu
Air purifier intuthu. Kanjani ukukhetha purifier emoyeni ze ezindlini
Negesi kubhayela "Electrolux": imfundo, umdwebo, ukubuyekezwa
Rack ngoba synthesizer izici lakhetsiwe
Kanjani ukumelana nokucindezelwa ngokwengqondo? Kanjani ukuba simelane nokucindezelwa ngokwengqondo
Lithium - kuyini? Lithium kwenziwa engumshumayeli
Intuthu Liquid: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka. Ukwakheka kanye isicelo intuthu ketshezi
Nati Pine, indlela ukuhlanza lesi sidlo?
Crimean Observatory Astrophysical: ikheli, izithombe